I-Apple isungula i-beta yesihlanu ye-tvOS 10.2.1 | Ndisuka mac
I-Apple ikhupha i-beta yesihlanu ye-tvOS 10.2.1
Kule veki kuthe cwaka xa kufikwa kwiibhetas, kuba inkampani esekwe eCupertino ikhuphe i-beta enye, yesihlanu ye-macOS 10.12.5, akukho kubheta kwe-Apple Watch okanye izixhobo ezilawulwa yi-iOS. Izolo ngoLwesine isungule i-beta entsha, i-beta yesihlanu ye-tvOS 10.2.5, inguqulelo elandelayo yenkqubo yokusebenza ye-Apple TV eza kuza kwezi zixhobo. Njengazo zonke ii-betas ezikhutshwa ngu-Apple kwesi sixhobo, I-tvOS 10.2.1 XNUMX beta yenzelwe abaphuhlisi kuphela, ngenxa yobunzima bokuba ukufakwa kwesatifikethi esifanelekileyo kwi-Apple TV kunokubonisa abanye abasebenzisi.
Le beta, eya kuba luhlaziyo lokuqala lwe-iOS 10.2, inguqulelo eza nenani elikhulu leempawu ezintsha, ayibandakanyi amanqaku amatsha abalulekileyo ngokwemisebenzi njengoko iApple ijolise kuyo lola uguqulelo lwenkqubo yokusebenza ye-Apple TV eya kuhlala ihlaziywa kude kube kusungulwa i-tvOS 11, zicwangciselwe ukuphela kukaSeptemba okanye ekuqaleni kukaOktobha.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, usetyenziso lwe-Apple TV Remote luhlaziyiwe ukuze luhambelane ne-iPad, ukuze sikwazi lawula umxholo oboniswe kwisixhobo sethu kwithebhulethi yeApple. Ukuthathela ingqalelo ukuba i-iPad ihlala ifumaneka kwigumbi lokuhlala kumakhaya amaninzi, yayiluhlaziyo oluza kuthi kungekudala lufike. Ngethamsanqa abasebenzisi abakhange balinde ixesha elide.
Nge-5 kaJuni, u-Apple uza kuqala iNkomfa yaBaqulunqi be-Apple, inkomfa apho I-Apple ukwazisa ngokusemthethweni i-tvOS 11 kunye nazo zonke ezinye iinkqubo ezisebenzayo inkampani esebenza kuzo ngoku. Iiyure emva kokumiliselwa, abafana baseCupertino baya kukhupha ingxelo yokugqibela ye-tvOS 11, ibeta eya kuthi iphinde ifumaneke kubaphuhlisi ababhalisiweyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple ikhupha i-beta yesihlanu ye-tvOS 10.2.1
Dibana ne-elago L4 Yima, indawo yokuyila ye-MacBook yakho